« prev 1 … 6 7 8 9 … 10 next »
Sagal Radio Services • News Report • October 23, 2019
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka digay hadii loo baahdo in la tago dagaal ku saabsan mashruuc biyo xireenka Wabiga Niil ee ay ku muransan yihiin iyaga iyo Masar, in dalkiisu diyaar u yahay malaayiin dad ah, laakiin arrinta kaliya ee lagu xalin karo uu yahay wada hadal.
Ismari-waa ayaa wali ka taagan dhismaha dowlad gobolleedka Galmudug, waxaana soo ifbaxaya khilaaf xoogga oo u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Ahlu Sunna Waljameeca.
-Dowladda Doomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay hadalkii safiirka Mareykanka ee Kenya Kayle McCarter oo sheegay in uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kalana hadlay arinta muranka Badda
Dowladda Soomaaliya oo Ciidamo Kumaandoos ah geysay Dhuusamareeb iyo dhaq dhaqaaqyada ciidan…
Wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in Ciidamo Kumaandoos ah ay dowladda Soomaaliya ka dejisay magaaladaas, kuwaasoo diyaarado looga daabulay magaalada Muqdisho.
Kooxo hubeysan oo xalay Gaalkacyo ku dilay Taliye kuxigeenka Ilaalada Waddooyinka Mudug
Kooxo hubeysan ayaa xalay fiidkii waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku dilay taliye kuxigeenka Ilaalada Waddooyinka Gobolka Mudug oo lagu magacaabi jiray Maxamed Faarax.
Saameynta Hargeysa uu ku yeeshay Qaad la'aanta
Labaddii cisho ee u dambeeyey magaalooyinka Somaliland ayaa waxa ka dhacay jaad la’aan ka dib markii qoomiiyada Oromiya rabshado ka dhaceen oo la xidhay jidadkii magaalooyinkoodda soo galayey iyo kuwii ka baxayey.
Warbaahinta Mareykanka oo sheegaya in Hoggaamiyaha Daacish lagu dilay howlgal qarsoodi ah
Saraakiil ka tirsan Milateriga Mareykanka ayaa sheegaya in howlgal qarsoodi ah oo ay qaadeen lagu bartilmaameedsaday Hoggaamiyaha ISIS ama Daacish Abuubakar Al-Baqdaadi.